Amsanchar - Nepali news portal.Amsanchar
अपाङ्ग व्यक्तिलाई राजनीतिमा सहभागीता बढाउन नीतिगत पहल हुनुपर्नेमा जोड
काठमाडौँ, १९ असार । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिमा सहभागीता बढाउन नीतिगत पहल हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाल महिला अपाङ्ग सङ्घद्वारा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी व्यक्ताहरूले राजनीतिक गतिविधीमा सहभागी हुन पाउने, निर्णायक पदका लागि आफुलाई मन परेको प्रतिनिधीलाई चुन्न पाउने हकबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये पनि
एमाले सचिवालय बैठक बस्दै : यस्ता छन् एजेन्डा
काठमाडौँ, १९ असार । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आज बस्दैछ । केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बिहान ११ बजेका लागि बैठक आह्वान गरिएको प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो । आगामी चुनावको तयारी, पार्टीको आन्तरिक विषय र राष्ट्रिय राजनीतिबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको
भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्साबारे जंगीअड्डामा गहन छलफल भएको छ। नेपाली भूभागलाई भारतको नक्सामा पारेको विषयमा विभिन्न दल, नागरिक समाज,
भारत तथा तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार व्यवस्थित र आधुनिक किसिमले सहजीकरण हुने महत्त्वाकांक्षीसहित निर्माण गरिएको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) पूर्ण
नेपाल–भारतका बीच उत्पन्न सीमा विवाद समाधान गर्न भारत सकारात्मक बन्ने संकेत देखिएको छ । नेपाल सरकारले कूटनीतिक र राजनीतिक पहल
बाँके, बर्दिया, नवलपरासी, चितवन, कञ्चनपुर, प्यूठान र रूपन्देहीलगायतका जिल्लाका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी र थुनुवा रहेको पाइएको छ । नवलपरासी–बर्दघाट
महाकाली नदीमा एकतर्फी बाँध बनाएको थियो । सन् १९१० मा बाढीले बाँध बगाएपछि भारत सरकारले राणा सरकारलाई बाँध निर्माण गर्न
काठमाडौँ, १९ असार । नेपाली सेनाले आफ्ना हिताधिकारीका बालबालिकाका लागि प्रयोग गर्न खरिद गरेको । भिटामिन डी थ्री इप्स बायोडी’
काठमाडौँ, १९ असार । हाल देशका विभिन्न क्षेत्रमा गएराति देखि नै वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ
काठमाडौँ, १९ असार । आज २०७९ साल असार १९ गते आइतबारको राशिफल । मेष : साथीभाइबाट सहयोग मिल्नेछ। प्रेममा धोका
थप ४४ जनामा कोरोना संक्रमण, १६ जना डिस्चार्ज
काठमाडौँ, १८ असार । थप ४४ जनामा कोरोना (कोभिड-१९) संक्रमण भएसंगै नेपालमा संक्रमितको संख्या ९ लाख ७९ हजार ७ सय
सूचनाको हक र सकारात्मक सोचसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
भक्तपुर, १८ असार । ‘सूचनाको हक र सकारात्मक सोच’ विषयक एकदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय सञ्चार केन्द्रको
सुदूरपश्चिम, १८ असार । पछिल्ला महिनामा खाने तेल, साग तरकारीलगायत उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
काठमाडौँ, १९ असार । मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परिरहेको अवस्थामा विकासको नाममा एकै दिन हतार हतारमा १२ अर्ब ५४ करोड ७
काठमाडौँ, १९ असार । विगत दुई वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तरको मूल्य वृद्धिले घाटा बढाएपछि नेपाल आयल निगमले भण्डारण निर्माणलगायतका योजना
काठमाडौँ, १९ असार । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले झन्डै तीन वर्षदेखि संसद्‍मै अड्किएको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने
काठमाडौँ, १९ असार । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय समिति बैठक आइतबार बस्दैछ । महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि पटक-पटक केन्द्रीय
लुम्बिनी जसपामा ‘को’ बलियो ?
काठमाडौँ, १९ असार । जनता समाजवादी पार्टी विभाजन गर्ने सहमति भएपछि दुई पक्षबीच नेता तथा कार्यकर्ता तानातान सुरु भएको छ।
काठमाडौँ, १९ असार । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिमा सहभागीता बढाउन नीतिगत पहल हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाल महिला अपाङ्ग
युक्रेनमा रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमण, २१ जनाको मृत्यु
किभ, १८ असार । युक्रेनमा शुक्रबार फेरि रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमण भएको छ । युक्रेनमा पछिल्लो
दक्षिणी इरानमा भूकम्प : पाँच जनाको मृत्यु
एजेन्सी, १८ असार । दक्षिणी इरानमा ६ दशमलव १ रेक्टर स्केलको भूकम्प जादाँ कम्तिमा पाँच
काठमाडौँ, १७ असार । दक्षिण कोरियामा अवैध रुपमा काम गरिरहेका १३ जना नेपाली पक्राउ परेका
करिष्माले अनसनरत निहारिकालाई भनिन्, ‘बच्चा लिएर मेरो घर आउ, म छु’
फिल्म ‘सर्वजित’ निर्माणमा मन्त्री आलेले सहयोग गर्ने
एफक्युबले रोक्यो ‘कबड्डी ४’को प्रदर्शन
कान्समा नेपाली सर्ट फिल्म ‘लोरी’ले जित्यो अवार्ड
काठमाडौँ, १९ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार तोकेको विदेशी मुद्राको बिनीमय दर अनुसार यस प्रकार रहेको छ । Exchange
आज अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइँदै
गरिबीको रेखामुनि रहेका आवसविहीन नेपालीलाई आवासको अधकार दिनका लागि आवासको अधिकार सम्बन्धी विधेयक तयार भएको
अधिनायकवादको हौवा फैलाएर प्रतिपक्षले गर्ने आन्दोलनको सशक्त प्रतिकार हुन्छ
लेखक तथा विश्लेषकः तेजबहादुर ढकाल, काठमाडौँ कम्युनिष्ट घोषणापत्रका मस्यौदाकार कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगलस् हुन् । कार्ल मार्क्सको पछि छापिएका संयुक्त कृतिहरुमा पनि एंगलसले आफ्नो नाम नराख्नु उनको महानता हो ।
‘महेश बस्नेत एमालेको खम्बा हुन् : ढाडस दिने काम बन्द गर्नुस्’
नेपाली युवाको मात्र हैन, आम नेपालीको आशा र भरोषाको केन्द्र विन्दुका रुपमा महेश बस्नेतको परिचय आउँछ । एमाले, युवा र विकासको नेतृत्व गर्ने शतिसाल झैं अगाडी बढ्ने आट, क्षमता, योग्यता
विवेकशील साझा पार्टी र राप्रपा बिच एकीकरणको घनिभूत तयारी हुँदै छ । साझा पार्टी अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले सबै कुरा मिल्न सक्ने तर नाम र चुनाव चिन्हमा सहमति हुन पर्ने बताउँदै
प्रणाम गुरुदेव, लाखौ देवता छन कसलाई मात्र पूजा गरौँ । लाखौ तिर्थ छन् कहा कहा मात्र घुमौ । लाखौ मन्त्रहरु छन कुन कुन मात्र जपौ’ । लाखौ औषधि छन कुन
काठमाडौँ, १९ असार । नेपाली सेनाले आफ्ना हिताधिकारीका बालबालिकाका लागि प्रयोग गर्न खरिद गरेको ।
सूर्यविनायक अस्पतालमा नगरवासीलाई १५ प्रतिशत छुट
भक्तपुर, १६ असार । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले सबै नगरबासीलाई स्वास्थ्य सेवामा १५ प्रतिशत छुट दिने
हैजाको लक्षण र रोकथामका उपायहरु
काठमाडौँ, १६ असार । उपत्यकाका १० ठाउँमा हैजा फेला परेको छ । डिल्लीबजार, सानेपा, बालाजु,
एउटा कलमको मूल्य सयदेखि हजारसम्म अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, सप्तरीमा बिक्री तथा हस्तान्तरण भएको
हाँस्दा हाँस्दै हड्डी खुस्किएर मुख आँको आँ भएपछि…
एजेन्सी । चीनमा एकजना महिला हाँस्दा हाँस्दै उनको मुख नै आँ‘ भैरह्यो र बन्द गर्न
टिल्टेपक गाउँमा मान्छेदेखि जनावरसम्म सबै दृष्टिविहीन !
एजेन्सी । मेक्सिकोमा एउटा गाउँलाई दृष्टिवीहिनको गाउँ भनिन्छ । जहा मान्छे मात्र नभएर कुनै जनावरले
काठमाडौँ, १५ असार । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १० अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन
काठमाडौँ, १३ असार । ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाले ‘एमबीबीएस’ पढाउन आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ ।
काठमाडौँ, ९ असार । कक्षा ११ र १२ तहमा नेपालमै उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध भएकाले राम्रो
भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्साबारे जंगीअड्डामा गहन छलफल भएको छ। नेपाली भूभागलाई भारतको नक्सामा पारेको
भारत तथा तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार व्यवस्थित र आधुनिक किसिमले सहजीकरण हुने महत्त्वाकांक्षीसहित निर्माण गरिएको एकीकृत
नेपाल–भारतका बीच उत्पन्न सीमा विवाद समाधान गर्न भारत सकारात्मक बन्ने संकेत देखिएको छ । नेपाल